समकालीन नेपाली राजनीतिका आन्तरिक र बाह्य चुनौतिहरु | नयाँ शक्ति नेपाल
१५ कात्तिक २०७२, काठमाडाैं ।
१. भनिन्छ – रोम जलिरहेको थियो, राजा निरो दरबारको बार्दलीबाट बाँसुरी बजाइरहेका थिए । त्यो दास युगका क्रुर र संवेदनाहीन शासकहरुको कुरा हो । आज हामी २१औं शताब्दीको खुला लोकतन्त्र र अति–विकसित सूचना–प्रविधिको युगमा छौं । हामी आफ्नो देशभित्रका कुनाकाप्चाका घटना मात्रै होइन छरछिमेक र विश्वभरका घटनाहरु क्षणभरमै डिजिटल सञ्चारमाध्यमहरुबाट थाहा पाउँछौं । तीबारे प्रतिक्रिया दिन्छौं, पोजिसन लिन्छौं । तर विडम्बना † अढाइ महिनादेखिको तराई–मधेश ‘बन्द’ले देशको आधा जनसंख्या आक्रान्त छ । डेढ महिनादेखिको दक्षिणी छिमेकी भारतको अघोषित नाकाबन्दीले पूरै देश अस्तव्यस्त छ । गत बैशाख १२ को महाविनाशकारी भूकम्पको ६ महिनासम्म सामान्य ओत र दैनिक अत्यावश्यक बस्तुको समेत उचित व्यवस्थाको अभावमा जाडो याम शुरु हुँदै गर्दा लाखौं जनता उच्च जोखिमको अवस्थामा छन् । यी सबैको कूल योग स्वरुप दशौं खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएर देश दशकौं पछाडि धकेलिने अवस्थामा छ । तर जनताको नजरमा सरकार, नेता र पार्टीहरु मात्र होइन नागरिक समाज समेत मस्तले सुतिरहेका छन्; देशको राजधानी काठमाडौं निदाइरहेछ । के हामी निदाएकै हौं ? वा निदाएझैं गरेका हौं ? वा के हो ? अब के गर्ने त ? त्यसैको जवाफ दिन/खोज्न हामी यहाँ उपस्थित छौं ।
८. प्रसिद्ध साहित्यकार Oscar Wilde ले भनेका थिए –"We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars." हामी पनि दुर्गन्धित नालामा उभिएर पनि दूर क्षितिजको चम्किलो तारा हेर्ने साहस गरौं !
(२०७२ कात्तिक १५ गते आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. बाबुराम भट्टराईले राख्नुभएका बुँदाहरु ।)